Talo ku socota Shirka Aayo-ka talinta Puntland!! – Idil News
Talo ku socota Shirka Aayo-ka talinta Puntland!!
Posted By: Idil News Staff March 12, 2020
Shirka wadatashiga Puntland ee ka qabsoomi doona 15.3.2020 caasimada Dowlada Puntland ee Garowe waa mid loo han weyn yahay.
Shirkaas,ayaa kusoo beegmaya xili xasaasi ah oo ay Dowladda Federaalka Somaliya kala guur doorasho wajaheyso, islamarkaasna uu uu hooseeyo xiriirka Dowlada Federaalka iyo Dowlada Puntland ee xubinta ka ah.
Markii uu ku dhawaaqday shirka wadatashiga ee masiiriga ah Xukuumada uu hogaamiyo Madaxweyne Saciid C/laahi Deni,waxaa ku dhawaaqistaas uriyaaqay shacabka Puntland gudo iyo dibedba iyagoo dareensan faragelinta khaldan ay Dowlada Federaalka ku hayso siyaasadda,wadajirka iyo horumarka Puntland.
Waxaa si lamid ah usoo dhaweeyay shacabka Somaliyed ee ku dhaqan Gobolada kala duwan ee Soomaaliya oo ay dhibaataysay siyaasadda kala qeybinta iyo colaada ku dhisan ee ay kula dhaqantay Dowlada Federaalka.
Sidoo kale waxaa soo dhaweeyay siyaasiyiinta Somaliya intooda badan oo ay ugu horeeyaan madaxdii hore oo ay ka mid yihiin labadii Madaxweyne ee ka horeeyay madexwaynaha talada hada haya Xasan Shiikh Maxamuud iyo Shiikh Shariif Axmed.
Hadaba shirkaas lawada sugayo loona han weyn yahay,waa shir siyaasadeed, waxaana lagaga doodaayaa xaalada Puntland maanta mareyso iyo waxqabadkeeeda 22-kii sano ee ay soo jirtay.
Arrimaha ugu waa weyn ee shirkaas lagu gorfayn doono,waxaa laga xusi karaa?
Shirkaas maaha mid dhaqanku door ku leeyahay,maadaama waxaa laga hadlayo ay yihiin arimaha siyaasada (Political issues), sidaas awgeed waa shir siyaasi maaha shir dhaqan, dabcan dhaqanka ixtiraam waa ku leeyahay,laakiin waa shir lagaga hadlayo Puntland maxey qabsatay, maxey ka dib dhacday.
Ugu danbayntii waxaan baaq codsi ah udiraynaa Isimada Puntland oo aan ku leenahay gadaal uga daga shirka culaysna ha noqonina fursad hala siiyo hogaamiyayaasha Siyaasada,dhanka kale idinkoo taladiina ku kabaya.
Qurba joogta Puntland ee Denmark iyo Finland.